Indiza entsha yeBoeing 777-9 ibhabha isiya kwisikhululo seenqwelomoya saseDoha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Indiza entsha yeBoeing 777-9 ibhabha isiya kwisikhululo seenqwelomoya saseDoha
Novemba 17, 2021
Indiza entsha yeBoeing B777-9 ibhabha isiya kwisikhululo seenqwelomoya saseDoha.
Inqwelo-moya, ekulindeleke ukuba ijoyine inqwelo-moya yeQatar Airways kungekudala, iya kuba yeyona jethi yeenjini ezimbini ezikhulu neyona isebenzayo ehlabathini, inikezela ngama-20 epesenti yokusetyenziswa kwepetroli okuphantsi kunye nokukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo kuneenqwelomoya zesizukulwana sangaphambili.
I-Qatar Airways yamkele ijethi yale mihla, eyonga amafutha kwisikhululo seenqwelomoya saseDoha.
I-777-9 yakha kwi-777 kunye ne-787 yeentsapho ze-Dreamliner ezikhethwa ngabakhweli kunye nezihamba phambili kwimarike.
Inqwelomoya iya kuhlala eQatar ngaphambi kokuba ibuyele eSeattle's Boeing Field ukuze iqhubeke nenkqubo yayo yovavanyo oluqatha.
Qatar Airways namhlanje ibonise indima yayo njengomthengi wokuphehlelelwa kwehlabathi kwisizukulwana samva nje iBoeing 777-9 inqwelo moya emva kokwamkela ijethi yale mihla, eyonga amafutha kwisikhululo seenqwelomoya saseDoha International (DIA).
Inginginya yeendwendwe zeVIP zingenele Qatar Airways UMlawuli oyiNtloko weQela, uMhlonishwa uMnumzana Akbar Al Baker, ukuba abe nesabelo ekufikeni kwenqwelomoya, eya kuhlala eQatar ngaphambi kokuba ibuyele kwi-Boeing Field yase-Seattle ukuze iqhubeke nenkqubo yokuvavanya ngokungqongqo.
Inqwelo-moya, ekulindeleke ukuba ijoyine inqwelo-moya ephumelele ibhaso kwikamva elingekude, iza kuba yeyona jethi yeenjini ezimbini esebenza ngokufanelekileyo ehlabathini, iza kukhupha i-20 pesenti yokusetyenziswa kwepetroli ephantsi kunye nokukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo kuneenqwelomoya zesizukulwana sangaphambili. Ubuchwephesha obuphambili obuvumela oku kusebenza kakuhle liphiko layo elitsha le-carbon-fiber composite, ii-injini ezintsha kunye ne-nacelles ye-laminar yendalo.
iBoeing I-777-9 yakhela phezu kwabakhweli abakhethwayo kunye nabahamba phambili kwimarike 777 kunye ne-787 yeentsapho ze-Dreamliner ukuhambisa amava ngenqwelomoya kwixesha elizayo. Abakhweli kunye nabasebenzi ngokufanayo baya kunandipha ukuphakama kwekhabhinethi ekhululekile ngakumbi, ukufuma okungcono, ukukhwela okugudileyo, ikhabhinethi ebanzi, iifestile ezinkulu kunye nolwakhiwo oluphangaleleyo.
Qatar Airways UMlawuli oyiNtloko weQela, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Kwakubuya ngo-2013 apho iQatar Airways Group yaqala yabhengeza utyalo-mali olucwangcisiweyo kwinqwelomoya ye-Boeing yamva nje.
“Emva kokutyelela i- iBoeing Umzi-mveliso ose-Everett, eWashington ngoSeptemba ka-2018, saba nethuba lokujonga i-777-9 kufutshane nomntu, kodwa namhlanje iphawula ithuba lokuqala lenqwelomoya kunye neendwendwe zethu ezibekekileyo zeVIP ukuba zibone ukuzinikela kwethu okubalulekileyo kule nqwelomoya imangalisayo apha eQatar. njengoko ifika okokuqala.
“Sinebhongo elikhulu ngokuba ngumthengi wokuphehlelelwa kwihlabathi jikelele kule mveliso ikhokelayo kushishino, kunye nokukwazi ukubonisa ukuzibophelela kwethu ekuqhubekeni nokuxhasa uthungelwano lwethu olukhulayo lwehlabathi ngomkhosi weenqwelomoya oquka awona mancinci, abona baphambili kwezobuchwepheshe kunye nabasebenzayo amawele- Iinqwelomoya zeenjini emhlabeni. ”
Umongameli kunye ne-CEO ye-Boeing Commercial Airplanes, uMnu. Stan Deal, uthe: "Siwongekile ngokuzibophelela okungapheliyo kwe-Qatar Airways kwi-777-9 kunye nentsebenziswano kunye nokusungula izinto ezintsha. Ngophuculo olungazange lubonwe ngaphambili ekusebenzeni kwepetroli kunye nokukhutshwa kunye namanqanaba amatsha okuthuthuzela, sijonge phambili ekuboneni abakhweli be-Qatar Airway abangama-777-9 kwiminyaka emininzi ezayo.